Igama eliphambili lophando kufuneka liphendule le mibuzo | Martech Zone
Sibukele iinkampani ezininzi zisenza oko zikubizayo yophando ngegama elingundoqo kwaye ndiyamangaliswa kukuba ingakanani na ingcaciso abayiphosayo xa bacebisa iinkampani ukuba ngawaphi amagama aphambili ekujolise kuwo kunye neendlela zabo zokuthengisa umxholo. Nantsi imibuzo ebalulekileyo ekufuneka siyiphendule
Ngawaphi amagama aphambili okuqhuba ukuguqula? Ukuba awazi, ndingacebisa ukuhlawula kubahlalutyi ngokufanelekileyo kwaye unika ingxelo ukuze uchonge amagama aphambili aqhuba ishishini… hayi ukugcwala. A Impazamo ephambili Sibona ziinkampani ezininzi kugxilwe kumagama aphambili aqhuba ukugcwala kunamagama aphambili aqhuba ishishini. Ukufumana inqanaba elisemthethweni kuthatha ixesha- qiniseka ukuba uchitha ezo zixhobo ngobulumko ngokubeka ngokwenyani kubakhenkethi abathengayo. Abacebisi bahlala befumana amagama aphambili anezinto ezininzi zokukhangela. Ngaphandle kokuba uthengisa intengiso kwindawo yakho, ufuna ngaphezulu kokundwendwela- ufuna ishishini
Ngawaphi amagama aphambili okwangoku? Kungenxa yokuba iinkampani zichitha ixesha elininzi zihlalutya ukugcwala kwabantu, zihlala ziphoswa ngamagama aphambili angazibekiyo kakuhle kodwa ingayi. Ukuchonga amagama aphambili kunye namaphepha owangcwatywayo kwizinga eliphezulu lelona thuba liphambili tweak loo maphepha kwaye ufumane isikhundla esingcono nge. Sisebenzisa Semrush ukufumana amaphepha kunye namagama aphambili esiba kuwo. Emva koko siya kulungiselela loo maphepha kwaye sihlala sifumana i-bump enhle kwinqanaba kunye nokugcwala.
Zeziphi izihloko eziphambili apho amagama akho aphambili anokuhlelwa khona? Amaphepha akwiziko lakho anokuma kwinqanaba lokudityaniswa kwamagama aphambili. Kubalulekile ukuba uyiqonde izihloko eziphambili amagama akho aphambili anokulungelelaniswa nomdlalo wewebhusayithi kunye nolungelelwaniso lwakho. Ngaba ulawulo lwakho lwendawo yakho luyahambelana negama lakho eliphambili? Ukuba akunjalo, kunokubakho amathuba okwakha amaphepha kunye namacandelo esiza agxile kutyelelo lwendalo. Sihlala sicebisa amaphepha ambalwa okufika kwezinto ezijolise kwigama eliphambili kunemveliso okanye inkonzo yenkampani. La maphepha aqhuba irenki, ukugcwala kunye nokuguqulwa. WordStream inesixhobo segama eliphambili apho ungancamathisela khona amagama aphambili ayi-10,000 kuwo kwaye iya kuwabeka ngokwazo.
Ngawaphi amagama aphambili ekufuneka ukhuphisane nawo? Amaxesha amaninzi, ukhuphiswano lwakho lufumana ukugcwala kwabantu ukuba… ukuba uqonde kuphela ukuba babekweliphi inqanaba ongekho. Kananjalo, amagama amaninzi aphambili anokungabikho ukufikelela kwinqanaba elifanelekileyo. Kutheni ukhuphisana ngamagama aphambili awuyi kuphumelela? Kwakhona, Semrush kuye kwaba sisixhobo esikhethiweyo soku. Singajonga kwimimandla ekhuphisanayo kwaye siphinde sihlolisise amagama aphambili kwinqanaba lethu lokhuphiswano ukubona ukuba asinazo na izithuba kwisicwangciso sethu somxholo.
Ngawaphi amagama aphambili onokuthi uvelise umxholo kuwo oya kubangela inqanaba kunye nokugcwala? Kulungile ukuvelisa uluhlu lwetoni yamagama aphambili kunye namabinzana afanayo… kodwa ngawaphi amabinzana onokuthi ubhale kuwo izithuba zebhlog, iphepha lokufika kwezinto eziphilayo, infographics, amaphepha amhlophe, iincwadana, imiboniso kunye nevidiyo namhlanje oko kungakhokelela kwiziphumo ezikhawulezileyo? Asikholelwa ukuba uphando lwamagama aphambili alulunganga ngaphandle kokuba ubonelela ngomxholo wezindululo kunye nohlalutyo. Ukufumana umsila omde (ivolumu esezantsi, efanelekileyo kakhulu) amagama aphambili kuye kwalula ukusebenzisa WordStream.
Ngendlela, ukuba awubonanga ujongano lomsebenzisi olusandula ukuphuculwa ukusuka Semrushkuyamangalisa:
Sithanda ukusebenzisa Semrush Uhlalutyo olugqityiweyo kunye ne-WordStream yokufumanisa ixesha elide kunye nokuhlelwa kwamagama aphambili. Ukubhengezwa: The Semrush ikhonkco kule posi likhonkco lethu lokudibana.
tags: elingundoqoyophando ngegama elingundoqoamagamaamagama angundoqo we-longtailsemrushigama
Ukuphendula ngokwasentlalweni kunye ne-ROI ngamaShishini